Joy News 24 သတင်းဌာနဟာ မကြာ​သေးခင်က ကိုရီးယားအနုပညာနယ်ပယ်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်​နေကြတဲ့ လူအ​ယောက် ၂၀၀ ကို ​​ခေါ်ယူပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အ​ကောင်းဆုံး K-Drama စုံတွဲ​တွေကို မဲ​ပေး​​ရွေးချယ်စေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ မဲအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ K-drama စုံတွဲ (၇) တွဲက​တော့ ​အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
7. Um Ki Joon နဲ့ Kim So Yeon
အဆင့် ၇ ​နေရာကို ရရှိခဲ့တာက​​တော့ SBS ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ နာမည်​ကျော် “Penthouse” စီးရီးမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ Um Ki Joon နဲ့ Kim So Yeon တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစုံတွဲဟာ မဲ ၂၀၀ မှာ ၆ မဲ ရရှိပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အ​ကောင်းဆုံး K-drama စုံတွဲစာရင်းမှာ ပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
6. Shin Ha Kyun နဲ့ Yeo Jin Goo
JTBC ရဲ့ “Beyond Evil” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ အတွဲညီညီသရုပ်​ဆောင်သွားခဲ့တဲ့ Shin Ha Kyun နဲ့ Yeo Jin Goo တို့က​တော့ ဒီစာရင်းမှာ ပါဝင်လာတဲ့ တစ်ခုတည်း​သော ​ယောကျ်ား​လေးစုံတွဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ဟန်ချက်ညီတဲ့ သရုပ်​ဆောင်ချက်​တွေ၊ bromance ​တွေ​ကြောင့်မဲ ၂၀၀ မှာ ၈ မဲကို ရရှိပြီး အဆင့် ၆ ​နေရာကို ရရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်​။
5. Lee Do Hyun နဲ့ Go Min Si
​နောက်ထပ် မဲ ၈ မဲကို ရရှိပြီး “Beyond Evil” က Shin Ha Kyun, Yeo Jin Goo တို့နဲ့ သ​ရေကျခဲ့တာက​တော့ “Youth of May” ဇာတ်လမ်းတွဲနဲ့ ပရိသတ်​တွေကို မျက်ရည်ကျ​စေခဲ့တဲ့ Lee Do Hyun နဲ့ Go Min Si စုံတွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးဟာ “Sweet Home” ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ​မောင်နှမအဖြစ် သရုပ်​ဆောင်ခဲ့​ဖူးပေမဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲမှာ​တော့ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ​တွေအဖြစ် ပီပြင်​အောင် အချိတ်အဆက်မိမိ သရုပ်​ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။
4. Kim Dae Myung နဲ့ Ahn Eun Jin
tvN ရဲ့ “Hospital Playlist 2” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Kim Dae Myung နဲ့ Ahn Eun Jin စုံတွဲက​လည်း ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အ​ကောင်းဆုံး K-Drama စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ် ​ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့ ၂ ဦးက​တော့ မဲ ၂၀၀ ထဲမှာမှ ၁၄ မဲ ရရှိပြီး အဆင့် ၄ ​နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
3. Jo Jung Suk နဲ့ Jeon Mi Do
​နောက်ထပ် “Hospital Playlist 2” ထဲက စုံတွဲဖြစ်တဲ့ Jo Jung Suk နဲ့ Jeon Mi Do တို့က​တော့ ကိုရီးယားအနုပညာရှင်နယ်ပယ်ထဲက အတွင်းလူ ၁၈ ​ယောက်ရဲ့ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အ​ကောင်းဆုံး K-Drama စုံတွဲအဖြစ်​ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး အဆင့် ၃ ​နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။
2. Song Joong Ki နဲ့ Jeon Yeo Bin
tvN ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ “Vincenzo” ဇာတ်လမ်းတွဲထဲက Song Joong Ki နဲ့ Jeon Yeo Bin တို့ စုံတွဲက​​​တော့ ဇာတ်လမ်းပြသစဉ်တည်းက ပရိသတ်​တွေရဲ့ အချစ်ကို ရရှိခဲ့တာပါ။ ဒါ​ကြောင့် ကိုရီးယားအနုပညာရှင်နယ်ပယ်ထဲက အတွင်းလူ​တွေကလည်း ဒီစုံတွဲအတွက် မဲ ၂၀ ကို ​ပေးခဲ့ပြီး အဆင့် ၂ ​နေရာကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
1. Kim Seon Ho နဲ့ Shin Min Ah
၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ K-Drama စုံတွဲ​တွေထဲကမှ ​ရေပန်းအစား​ဆုံးနဲ့ chemistry အမိဆုံးလို့ဆိုရမယ့် Hometown Cha-Cha-Cha” ဇာတ်လမ်းတွဲက Kim Seon Ho နဲ့ Shin Min Ah တို့ စုံတွဲက​တော့ ဒီစစ်တမ်း​ကောက်ယူမှုမှာ ၁၀၃ မဲကို​တောင် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ​ကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် အ​ကောင်း​ဆုံး နံပါတ် ၁ K-Drama စုံတွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
ACB စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးက​ရော ဒီစုံတွဲတွေက ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရဲ့ အ​ကောင်းဆုံး K-drama ​တွေဆိုတာကို သ​ဘောတူလက်ခံပါသလား? ဒါမှမဟုတ် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ အကြိုက်ဆုံး တခြား​သော K-Drama စုံတွဲ​တွေ ရှိရင်လည်း မှတ်ချက်ပြုခဲ့ကြပါဦး​နော်
Next ကမ္ဘာ့ iTunes Chart တွေမှာ OST သီချင်းတစ်ပုဒ်တည်းနဲ့ စံချိန်တင်ခဲ့ပြန်တဲ့ BTS's Jin »
Previous « ဖူးစာရေစက် ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်လို့ Hi-So Oat နဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ကြောင်း Min Pechaya အတည်ပြု
၂၀၂၁ ပေကျင်းရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးရဲ့ အကြီးဆုံးဆုများကို ရရှိခဲ့တဲ့ Xiao Zhan နဲ့ Dilireba